Shir weyne balaadhan oo ay yeedheen xisbiga Waddani | Qaran News
Shir weyne balaadhan oo ay yeedheen xisbiga Waddani
Writen by Qaran News | 2:11 pm 12th Mar, 2018
XISBIGA WADDANI OO SHIRWEYNE QABSADAY:
Waxaa habeenkii xalay 11/03/2018; soo gaba’gaboobay shir balaadhan oo khadka is gaadhsiinta ah oo ilaa maalintii jimcaha 09/03/2018; u soo socday xisbiga mucaaridka ah ee Waddani.
Shirka oo ujeedadiisu ahayd wada tashi dib isu abaabulka iyo dardar gelinta guud ahaanba xisbiga Waddani gaar ahaana laamaha dibada ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan laamaha xisbiga Waddani uga dhisan qaaradaha dunida sida North America, Africa, Australia, Europe, iyo Asia.
Waxaa shirkan kasoo qayb galay dad aad u badan oo ah madaxda iyo hawlwadeenada xisbiga ee dalalka caalamka ayaa waxaa iyaguna kasoo qayb galay masuuliyiin kamida hogaanka guud ee xisbiga waddani sida gudomiyaha xisbiga waddani Dr Cabdiraxman Maxamed Cabdilahi ciro. gudomiyaha kumeelgaadhka xisbiga xildhibaan Cabdiqadir Xaji Ismaciil jirde. Hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan. Xoghayaha maaliyada xisbiga Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo saaraakiil kale oo heer qaran ah.
Shirka ayaa soo bilaamay maalintii jimcaha ee bishu ahayd, 9/3/2018: waxaana lagu lafo-guray himilada xisbiga iyo hanashada kaalinta ugu weyn ee talada dalka iyo sidii xisbiga Waddani u noqon lahaa kan ugu ballaadhan Jamhuuriyada Somaliland uguna saamaynta badan iyadoo laga dooday arimo aad u badan oo dhamaantood la xidhiidha istiraatiijiyada cusub ee xisbiga Waddani ku hawl gelaayo mustaqbalka dhaw iyo ka dheerba.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee noociisa ah (Teleconference true social media) ee ay isugu yimaadaan dad intaas leeg oo matelaaya laamaha dibada waxaa dhamaan laysku raacay qodabadii iyo go’aamadii shirka kasoo baxay. ugu danbayna shirka ayaa ku soo dhamaaday guul lagana soo saaray qodobo maamul oo khuseeya horuumarinta iyo habsami socodka xisbiga.
Xoghayaha guud ee Qaarada Europ ee Xisbiga Waddani.
Maxamed Carab Wacays,
1407 Vistors Online